Khilaaf ka dhashay hawlgalada Jubbooyinka ka bilowday
KISMAYO, October 7,2014 [GO]- Shalay ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa ku dhaqaaqay deegano ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab waxay qabsadeen Lugloow, Yoontay, iyo Buulagaduud.
Qabsashada deeganadaas kaddib ayaa lagu wargeliyay saraakisha ciidamada AMISOM Qeybta Sector 2 ee ka hawlgala Jubbooyinka inay ku ekaa-daan deeganada hadda ay xoreeyeen ayadoo lagu wargeliyay in ciidamada Sector 1 ee dhawaan xoreeyay Baraawe ay soo gaarayaan Jubbooyinka gaar ahaan Degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe.
Jubbaland ayaa gebi ahaan diiday wargelinta kasoo gaartay Muqdisho waxayna sheegeen inay wadayaan dagaalka ay Alshabaab kaga xoreynayaan Jubbooyinka ,
Dihinaca kale maamulka Jubbaland ayaa diiday in ciidamo Soomali ah iyo kuwa isku dhaf ah la keeno hawlgalka ayagoo sheegay inay awoodaan ka xoreynta al-shabaab degaanada hoos yimaada maamulkooda.
Ciidamada oo xalay ku baryay Buulagaduud ayaa lagu wadaa in dhawaan ay uga ruqaansadaan Kamsuuma oo u jirta 90km waqooyiga Kismaayo.
Mareykanka oo Soomaaliya ka cafiyey qaan dhan hal bilyan oo Doolar 27.09.2020. 19:00
Rooble oo shaaciyey talaabo uu u qaadayo ciribtirka kufsiga soo batay 27.09.2020. 16:25
Heshiiska doorashada 2020-21: "Darbi xanibay" yoolkii Villa Soomaaliya 27.09.2020. 14:00
Ra'iisul Wasaare Rooble oo Xafiiska lagu wareejiyay 27.09.2020. 12:38
Caruur ay Al-Shabaab "u diyaarisay is-miidaamin" oo lasoo badbaadiyey 27.09.2020. 07:00
Sudan oo diidey dalab ku aadan xiriirka Israel kana yimid Mareykanka 27.09.2020. 06:40